Walitti bu'iinsi Dirree Dhawaatti mudate lubbuu namaa tokko dabarse - BBC News Afaan Oromoo
Walitti bu'iinsi Dirree Dhawaatti mudate lubbuu namaa tokko dabarse
13 Sadaasa 2019
Walitti bu'iinsa har'a Dirree Dhawaatti uumamee lubbuu nama tokkoo dabarse.
Bakka bu'aan hoogganaa Dhimmoota Koominikeeshiinii Mootummaa magaalaa Dirre Dhawaa obbo Mikaa'eel Indaalaa BBC'tti akka himanitti gandoota magaalicha keessatti walitti bu'iinsi mudateera.
Iddoowwaan walitti bu'iinsi hedduminaan uumamee; ganda 06, ganda 05, Qaafiraa dachaatuu fi magaal akkasumas ganda odaa fi ganda gaaraa jedhamanitti akka ture dubbatan.
Dirree Dhawaatti Onkolooleessa 30 jalqabee waliitti bu'iinsi turu kan dubbatan hoogganaan kun, waliitti bu'iinsi kalee fi har'a mudateen miidhaan dhaqqabuu dubbatan.
Rakkoo nageenyaa magaalaa Dirree Dhawaa
'Dirree Dhawaa irraa erga nagaan fagaatee bubbuleera'
Walitti bu'iinsa har'a mudateen miidhamni qaamaa cimaa fi giddugaleessaa akka mudate obbo Miikaa'eel yoo himan, namoonni miidhamni salphaa irra gahe immoo gara hospitaalaa akka geeffaman dabalataan himaniiru.
Poolisii fi hospiitaalaarra namni du'e jiraachuusaa yeroodhaaf odeeffannoo akka hin qabne kan dubbatan hogganaan kun waliitti bu'iinsa kana tasgabbeessuuf qaamoonni nageenyaa hojjachaa jiru jedhaniiru.
Obbo Miikaa'eel waliitti bu'iinsi kun haallisaa akka jijjiiramuufi iddoo tokko yoo tasgabbeessan iddoo biraatti uumamuun isaa guutummatti haala jiru to'achuuf rakkisaa akka ta'e ni dubbatu.
Waliitti bu'iinsa kana bifa amantaa fi sabaa akka qabaatu yaaliin turu ibsuun, namoota waliitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban adeemsi seeratti dhiheessuu jabaatee akka itti fufu himaniiru.
Ammas ta'uu waliitti bu'iinsi uumame kun humna nageenyaa ol akka hintaane kan himan obbo Miikaa'eel,humnoota bulchiinsaa fi nageenya magaalattii fi raayyaa ittisa biyyaa waliin hojjachaa akka jiranis dubbataniiru.
Waliitti bu'iinsa uumame kana to'achuuf qaamota hunda waliin hojjachaa akka jiran ibsuun hawaasnis odeessaalee sobaa miidiyaa hawaasummaarratti dubbatamaa jirurraa akka ofqusatan himaniiru.
Sababa waliitti bu'iinsa har'a uumame adda baasuuf hojjachaa jiraachuusaanii ibsuun waan dabalataa dubbachuurraa garuu ofqusataniiru.
Waliigalatti miidhaa waliitti bu'iinsaan uumame ibsuuf odeeffannoo walitti qabaa jirra jedhan. walitti bu'iinsa gaafa Onkoloeessa mudateen namoota sagal irratti miidhaan dhaqqabuu kaasanii dubbatan.
Sababni waliitti bu'iinsa Onkoloeessa 30 mudate wal dhabdee namoota lama jidduutti uumame boodarra garuu gandaan wal qooduun gara dhakaa walitti darbachuutti ol guddatuusaa himaniiru.
Jiraataan magaalatti gaafannees garee Saatanaw jedhamuu himachuun haala ture akkas jechuun BBC'tti hime.
"Eda galgala gareen maqaa saatanawun moggaafamtee deemtu reebbichaa fi saamichaa uummata nagaan dalagatee Haramaayaa deemurratti raawwatte. Akkasumas ganama har'aa bakka gabaa koloneel jedhamutti manneen daldalaa samuuf yaalanis qaamonni nageenyaa adda bittineessaniiru."
Haaluma kanaan qotee bultoota jimaa daldaluuf deeman irratti saamicha irratti geggeessaniiru jedhan jiraataan kun.
Waaree booda naannoo sa'aatii sagaliitti namoonni lama yemmuu rasaasaan rukutaman; namni tokko achumatti du'uu fi namni lammaffaa immoo gara hospitaalaa geeffamuu jiraataan dalataan dubbataniiru.
24 Fuulbana 2019
Rakkoo nageenyaa: Dirree Dhawaan har'allee hin tasgabboofne
Marii Addis Wag: 'Itoophiyaatti olaantummaa seeraa kabachiisuun ajandaa waqtaawaadha'
Itoophiyaan MM Abiy Ahimad 'simannaa gootaan' simachuufi